IZIFUNDO EZILI-10 ZOBOMI ONOKUZIFUNDA KWIISHAKESPEARE QUOTES - UNXIBELELWANO
Izifundo ezili-10 zoBomi onokuzifunda kwiiShakespeare Quotes
Ngelixa uWilliam Shakespeare enokwaziwa njengelinye lehlabathi uninzi lwabadlali abadlalayo abaphumeleleyo nabakhuthazayo , Igama lakhe kunqabile ukuba linxulunyaniswe nehlabathi lezeshishini. Oku ikakhulu kungenxa yokuba kukho umahluko wehlabathi phakathi kwezorhwebo ezisikwe emqaleni kunye nembonakalo yobugcisa, ngelixa izinto zangaphambili zifuna ukuba nethuku kunye nokungenanceba le yokugqibela ixhomekeke kwitalente yoyilo nakwisakhono sendalo.
La mazwe mabini ahlala engqubana, nangona kunjalo, ngakumbi xa amagcisa ezabalazela ukuguqula italente yabo yoyilo iye kwindawo enenzuzo yorhwebo. Ngenxa yokuba umsebenzi kaWilliam Shakespeare wagqitha kuncwadi kwaye wamenza wakwazi ukuziphilisa ngobugcisa bakhe, ke ngoko umi njengomzekelo oqaqambileyo kuye nawuphi na usomashishini woyilo kule mihla.
Kwinqanaba elibaluleke ngakumbi, kufanelekile ukukhumbula ukuba amagama kaWilliam Shakespeare lilifa lakhe elikhethekileyo kwihlabathi langoku. Ukuthandwa kwabo okungapheliyo kuyaqhubeka ngenxa yemeko yokukhuthaza kunye neemvakalelo, eqhubeka nokufumana ukutolika okwahlukileyo kunye nengxoxo enkulu. Ke nangona zisenokusetyenziswa ngexesha elinye kwimbali, zihlala zichaphazeleka kubemi banamhlanje kumanqanaba amaninzi. Ngale nto engqondweni, kufanelekile ukuba uqwalasele ezona mpembelelo zikaShakespeare kunye nezifundo esinokuzifunda kubo ngo-2014.
izinto ekufuneka zenziwe emva koqhawulo-mtshato
1. Asikho kwiiNkanyezi ukubamba ikamva lethu kodwa kuthi -uJulius Caesar kuJulius Caesar
Kutshanje, iphephandaba i-Guardian libhiyozele usuku lokuzalwa lukaShakespeare lwama-450 ngokucela abafundi ukuba batyumbe iikowuti zabo abazithandayo kwiBard enkulu. Lo mgca uvela kuJulius Caesar wawungowona uthandwa kakhulu, ngelixa uhlala ungumthombo wobulumko obungapheliyo kunye nokuqonda. Ikhuthaza abantu ukuba bandise iitalente zabo kunye nezakhono zabo ekuphumeleleni, endaweni yokukholelwa ukuba zabo Ikamva lilele kwilishwa elingaziwayo nelichazwe kwangaphambili . Ikuxhobisa ukuba ukwazi ukulawula ikamva lakho kunye nokuceba ikhosi ofuna ukuyithatha ebomini bakho.
2. Hamba ngobulumko uhambe kancinci. Abo bakhawulezayo bayawa, bawe; -Romeo eRomeo noJuliet
Isantya senkqubela phambili kwezobuchwephesha sikhawuleze kakhulu kule minyaka ilishumi idlulileyo, ngesiphumo sokuba ubomi banamhlanje bunokonwatyelwa ngesantya esiphakamileyo. Oku kuhlala kukhokelela ekuthathweni kwezigqibo ezimbi, nangona kunjalo, njengoko kunqabile ukuba sithathe ixesha lokuvavanya ukhetho lwethu okanye siqwalasele iziphumo zezenzo zethu. Kuya kufuneka ke siwakhumbule la mazwi alula kodwa angafiyo avela kuRomeo noJuliet, asikhuthaza ukuba senze ngokungxama kwaye senze izigqibo ezizizo.Intengiso
3. Izizathu eziqinileyo zenza amanyathelo anamandla. - Lewis kuKing John
Kwinqaku elifanayo, kubalulekile ukuthatha amanyathelo asekwe ekuqiqeni ngokuqinileyo kunye nokuhlengahlengiswa okunenjongo. Njengoko uBard watshoyo kumdlalo wakhe wembali uKing John, izizathu ezinamandla zenza amanyathelo anamandla kwaye le yinto ekufuneka siyithathile kubomi bethu bobuqu kunye nobungcali. Nanini na xa unika umbono okanye umxholo, thatha ixesha lokulixhasa ngedatha efunyenwe ngononophelo kunye nobungqina. Oku kuya kubonelela ngesiseko esomeleleyo apho imeko yomntu inokukhula khona.
4. Bahlupheka kangakanani abo bangenamonde? -Iago kwintlekele yase-Othello
Intlungu ka-Othello yabhalwa kwakudala nge-1603, kodwa la magama ngokuqinisekileyo anokubaluleka ngakumbi namhlanje kunangaphambili. Isantya senkqubela phambili yetekhnoloji ngokuqinisekileyo sidale isizukulwane sabemi esinganyamezeliyo, kwaye olu phawu lunokuba nemveliso kakhulu kubomi bemihla ngemihla. Nokuba uyinkokeli yeshishini okanye ungumzali, umonde ukwenza ukuba unikeze ulwalathiso olunolwazi kwabanye kwaye wenze indawo apho abantu banokuphumelela khona. Umgangatho onovelwano, kwaye uboleka ekukhuliseni abanye.
5. Siyazazi into esiyiyo kodwa asazi ukuba sinokuba yintoni .– Ophelia eHamlet
I-Hamlet ngokuqinisekileyo ngumdlalo ocatshulwe kakhulu kaShakespeare, kwaye isenokuma njengolu phawu lubalaseleyo lomdlali odlalayo. Isicatshulwa esivelisayo sinika umbono wokulangazelela kwethu kunye nokukhula okuzayo, njengoko sizabalazela ukuqonda amandla kunye nobuthathaka bethu kwaye emva koko sifunde ukuba singaluqala njani uhambo lokuziphucula. Ukuqonda okunjalo kubalulekile ukuba uza kuphumeza iinjongo zophuhliso ezinokulawulwa, ngelixa ikwabonelela ngesiseko sokuzithemba esinokuphuhliswa ngokuhamba kwexesha.Intengiso
6. Izinto eziphumeleleyo zenziwe; Umphefumlo wovuyo ulele ekwenzeni. Cressida eTroilus naseCressida
Ukuba ungumrhwebi onqwenelayo, uya kuyiqonda ngcono le kowuteshini kunaye nabani na. Emva kwayo yonke loo nto, ngelixa iinjongo zalo naliphi na ishishini lokuthengisa kufuneka ekugqibeleni libe kukuvelisa uhlobo oluthile lwemali okanye ukubuyela ekuhlaleni, ihlala iyinkqubo yokuyila ishishini elifundisa ezona zifundo zibalulekileyo nezifanelekileyo. Yiyo loo nto oosomashishini abaninzi beka amashishini amaninzi ngexesha labo lobomi, njengoko behlala befuna ukuphuculwa kunye nolwaneliseko oluziswa zizazisi ngokujongana nokoyisa imiceli mngeni.
7. Yintsomi le; izele sisandi nobushushu, ingabonakalisi nto. -Macbeth kwiMacbeth
Le layini yakudala yencoko evela eMacbeth iya kuthi iphinde ihlangane nabantu abaninzi, ngakumbi abo bakha badibana nomntu othetha ngokungapheliyo ngaphandle kokubonelela ngento okanye isenzo ukuxhasa amagama abo. Ukusuka kubaphathi beshishini abasebenza ngokukhawuleza abasebenza ngokukodwa kwijoggon ukuya kwiirogues ezithembisa inguqu engasoze yenzeke, aba bantu banxibelelana ngokuzithemba kwaye bahlala bekwazi ukweyisela abanye ngelizwi lodwa. Lumka kwaba bantu, nangona kunjalo, kwaye uzame ukuqinisekisa ukuba abo bakungqongileyo benza okuhle kuzo naziphi na izithembiso abazenzayo.
8. Lide kangakanani elaa khandlela lilahle imiqadi yalo- iPortia kuMthengisi waseVenice
Ubugcisa bobunkokeli obunempumelelo budinga umbono ocacileyo, nokuba ujonge ukuqhubela phambili inkampani okanye ukufezekisa iinjongo zakho. Oku kunokuba nzima ukukhulisa kunye nokugcina ngexesha lokuphila wedwa kubomi bemihla ngemihla, apho iinkcukacha ezincinci nezibonakala ngathi zingabalulekanga zihlala ziphazamisa izicwangciso zakho kwaye zisebenzise ixesha lakho elibalulekileyo. Kubalulekile ukuba uhlale ugxile kangangoko kwiinjongo zakho zexesha elide, nangona kunjalo, kwaye uzame ukuqinisekisa ukuba isenzo ngasinye okanye isigqibo ngasinye siyanceda ukusondela kufezekiso.Intengiso
9. Kwaye amaxesha ngamaxesha ukuthethelela isiphoso kuyenza mandundu ityala ngokungxengxezela. - Ukusuka ePembroke kuKumkani uJohn
Esi sicatshulwa sibonisa ubulumko obudala kunye nobude, kwaye obukhuthaza wonke umntu ukuba aziphendulele kwiimpazamo zakhe. Nokuba zichaphazela ubudlelwane bethu okanye ukuqhuba kweshishini, kubalulekile ukuba sihloniphe ukuba iimpazamo zethu zinokonakalisa kwaye zibangele uxinzelelo kumaqela amsulwa. Bayinto engenakuphepheka kunye nenxalenye yobomi, nangona kunjalo, ke akufuneki ube neentloni ekwamkeleni ityala, ubonakalisa ukuzisola kwaye usebenza nzima ukulungisa ukreqo lwakho. Xa usenza izizathu ezibuthathaka nezibuthathaka, umane uyandisa ingxaki kwaye wonakalise ukuthembeka kwakho njengomntu ozimeleyo.
10. Ndinenyama eninzi kunenye indoda kwaye ke ngoko ndibuthathaka ngakumbi. -UKumkani uHenry IV kuHenry IV, Icandelo lokuQala
Isicatshulwa seShakespeare esingasetyenziswanga ngendlela engaqhelekanga; Oku kubalulekile ngokwenene kwiminyaka apho iBritani iyaqhubeka nokulwa bobabini abadala kunye nokutyeba kobuntwana . Esi sicatshulwa sibonisa inkolelo yakudala yokuba ukusweleka kunye nobuthathaka zilele ngendlela yomntu, lo gama umoya womelele kwaye ukwazi ukukhula ngonaphakade. Kuluntu lwanamhlanje olunolwazi ngakumbi, oku kunokuguqulelwa ngokulula njengesilumkiso ngokuchasene neengozi ze-ob
sithini isigqibo sonyaka omtsha
uthando lucinga ngemini
yazi into ongayaziyo
yenza imali eninzi kwi-intanethi
uyeke kanjani ukuthiya umntu okuhlukumezayo
indlela yokwenza ukufunda kube sisiqhelo
Ingaba wenza ntoni ngexesha lakho elisecaleni
Utshintsho aluyi kuza ukuba silindele omnye umntu okanye elinye ixesha
Ezona ndlela zilula zokuNweba i-iPhone yakho yoBomi boBomi
Iingoma ezingama-47 zamaXesha onke aMnandi ukuKonwabisa
Emva kokuba ndiyifundile le nto, ndiyazi ngokugqibeleleyo ukuba kufanelekile ukuba ndithule okanye ndithethe
Izona zizathu zixhaphakileyo zokuba kutheni abasebenzi beyishiya inkampani
Ukuphumla Kokulala Ukucinga Ngaphambi Kokuba Usebenze Ukuthengisa Izifo Eziqhelekileyo Unxibelelwano Ngolonwabo